मल कारबाही प्रकरण : ठेक्का रद्ध भए पनि कालोसूचीमा राख्न किन अलमल ? - Rajmarga
मल कारबाही प्रकरण : ठेक्का रद्ध भए पनि कालोसूचीमा राख्न किन अलमल ?
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का रद्ध गर्दै दुवै कम्पनीको झन्डै १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । सैलुङ र होनिको कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर उनीहरूले समयमा नै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ।
Previous post: थाहा पाइराख्नुस आज मंगलबारको राशिफलमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ?
Next post: शिक्षकबाट नै छात्रा बलात्कृत, बच्चा जन्मेपछि घटना सार्वजनिक